Manompo ireo izay handova famonjena
"Tsy fanahy manompo va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an’izay handova famonjena ?" Heb. 1:14.
Andriamanitra dia manana anjely izay ny hany anjara asany dia ny mitaona ireo izay handova famonjena (...) Ny misakana ny herin’i Satana no asan’ireo anjely ireo.
Ny asan’ireo iraky ny lanitra ireo dia ny manomana ny mponin’izao tontolo izao mba ho tonga zanak’Andriamanitra madio sy masina ary tsy voaloto. Kanefa na dia milaza ny tenany ho mpanara-dia an’i Kristy aza ny olona dia tsy mipetraka eo amin’ny toerana izay ahafahany mahatakatra izany asa fanompoana izany. Vokatr’izany dia sarotra kokoa ny asa ataon’ireo iraky ny lanitra. Satrin’ireo anjely izay mibanjina mandrakariva ny tavan’ny Ray any an-danitra ny hitoetra eo anilan’Andriamanitra, ao amin’ilay rivo-piainana madio sy masina any an-danitra. Misy asa tsy maintsy tanterahina anefa, dia ny fizarana izany rivo-piainan’ny lanitra izany amin’ireo fanahy izay alaim-panahy sy ianjadian’ny fitsapana. Atao izany mba tsy hanakanan’i Satana azy ireo tsy hahazo ny toerana izay omanin’ny Tompo ho azy ireo any an-dapan’ny lanitra. Ny fanapahana sy ny fahefana any an-danitra dia miara-miasa amin’ireo anjely ireo eo amin’ny asa fanompoana izay ataony ho an’ireo izay handova famonjena. – RH, 04 Jolay 1899
Ireo anjely, izay hanatanteraka ho anao izay tsy hainao atao ho an’ny tenanao, dia manantena ny fiaraha-miasa avy aminao. Miandry anao hanaiky ny fitaoman’i Kristy hanatona Azy izy ireo. Manakaikeza an’Andriamanitra sy ny hafa. Ampiandanio amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny sitraponao, ka asehoy izany amin’ny fanirianao, ny vavaka mangina ataonao sy ny fanoheranao ny devoly. Rehefa ny hanohitra ny devoly no hany fanirianao, ka mivavaka avy ao am-ponao tokoa ianao hangataka fanafahana amin’ny fakam-panahy, dia handray hery hoentinao miatrika ny tontolo andronao ianao. Anjara asan’ireo anjelin’ny lanitra ny manakaiky ireo izay ianjadian’ny fitsapana sy fakam-panahy, ary ireo ozoim-pahoriana. Miasa amim-paharetana sy amim-pitozoana izy ireo mba hamonjy ireo fanahy izay nanoloran’i Kristy ny ainy. Ary entin’ny anjely any an-tsompitry ny lanitra ny vokatra nojinjana rehefa eken’ny fanahy izany tombontsoa izany, rehefa eken’ny olona ny fanampiana avy any an-danitra izay atolotra azy, rehefa manaiky ny fiasan’ny Fanahy Masina ho azy izy ireo, ary rehefa mampiandany ny sitrapony amin’ny sitrapon’i Kristy izy ireo (...) Ary misy fifaliana lehibe any an-danitra. – RH, 04 Jolay 1899.